Avelao ny fitantanana fananan-tany marobe hitantana ny fialan-tsasatrao
Rafitra fitantanana fananana toerana marobe
Tsy toy ny fitantanana hotely, ny fitantanana fanofana fialan-tsasatra dia midika fanofana trano izay mety hiparitaka amin'ny toerana mihoatra ny iray. Matetika ny fampiasana rafitra PMS mahazatra dia mitaky anao hanana kaonty misaraka isaky ny toerana. Amin'ny tranga tsara indrindra dia azonao omena fidirana afovoany ianao avy eo. Na izany aza, mbola mila mifamadika hatrany amin'ny kaonty ianao. Mazava ho azy fa mandany fotoana be tokoa izany rehefa manandrana misintona ny kalandrie misy anao ary miaraka amin'ny lafiny ratsy hafa toy ny tsy fahampian'ny fanaovana tatitra afovoany.
Na izany aza, amin'ny rafitra fitantanana fananan-tany misy an'i Zeevou dia azonao atao ny mitantana ny fanananao rehetra amin'ny fidirana tokana. Na dia hita manerana ny firenena maro aza izy ireo!
Azonao an-tsaina ny fotoana hanavotana anao!
Ahoana ny fomba hanampian'ny PMS an'i Zeevou Multi-toerana?
Ny rafi-pitantanana fananan-tany misy an'i Zeevou dia ahafahanao manambatra manokana ny tombotsoan'ny rafitra famandrihana trano fandraisam-bahiny sy ny an'ny mpitantana fantsona hofan-trano fialan-tsasatra. Na dia miorina amin'ny foto-kevitry ny fananana misy sokajy maromaro miaraka amin'ny karazana unit aza izy io, dia tsy hanaiky lembenana amin'ny fahafaha-manana fananana amin'ny toerana maro na koa. Noho izany, i Zeevou dia manambatra ny tsara indrindra amin'ny tontolo roa.
Ny firafitray hierarchical dia ahafahanao mamaritra ireo firenena iasanao. Tanisao ireo tanàn-dehibe ao amin'ireo firenena ireo ary araraoty arakaraka ny faritra. Ao anatin'ny faritra dia ampio ny fanananao avy eo. Ny fananana dia mifanentana amin'ny toerana amin'ny tena fiainana. Ka io dia mety ho fivoarana miaraka amina tranobe marobe, isaky ny gorodona misy trano maromaro. Ireo singa miaraka amina famaritana mitovy amin'izany izay tianao amidy amin'ny vidiny mitovy dia atambatra amin'ny Unit Type.
Zeevou dia mamela anao mamaritra vola isan-karazany ho an'ny fananana samihafa izay ahafahanao miasa manerana ny firenena marobe.
Miteraha pejy iray ho an'ny trano tsirairay
Ny firafitra arahana ny fananana ao amin'ny Zeevou Extranet, dia hita taratra eo amin'ny tranokalan'ny famandrihana mivantana an'i Zeevou sy ny motera famandrihana. Hiteraka pejy iray ho an'ny trano sy tanàna ary firenena rehetra ampidirinao ao amin'ilay rafitra ny rafitra. Midika izany fa amin'ny fotoana vitanao amin'ny fananganana Zeevou dia hanana manjelanjelatra ianao tranokala famandrihana mivantana mihazakazaka ary mihazakazaka tsy amin'ny fotoana mihitsy.
Ny lahasa fanafarana iCal dia mamela anao hamorona sakana misy fepetra amin'ny fananana, ny karazana unit, na ny haavon'ny unit. Sady anatiny sy amin'ny fanafarana na fanondranana avy amin'ny tranokala hafa. Ny iray amin'ireo fomba azo ampiasaina dia ny famoronana daty voasakana ao Zeevou. Rehefa misy famandrihana atao amin'ny tranokalan'ny antoko faha-3 izay tsy iray amin'ireo 200 channel izay ifandraisantsika amin'ny alàlan'ny API roa-lalana. Toy izany koa, ny kalandrie an'ny antoko fahatelo dia azo sakanana rehefa miditra ao Zeevou ny famandrihana. Ny endri-javatra dia azo ampiasaina hananganana fifandraisana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Amin'izany raha manofa trano ianao amin'ny toerana iray manontolo sy amin'ny efitrano misaraka. Ny efitrano dia azo apetraka hanakanana raha toa ka voapetraka ny toerana iray manontolo ary azo tanterahina ihany koa ny mifamadika.
Haavo karazana Unit
Zeevou dia mamela anao hanana firenena tafatsangana ao amin'ilay rafitra. Amin'ny sehatra firenena dia azonao atao ny mampakatra sary, manampy famaritana ary mampiditra ny lohateny meta sy ny famaritana meta ho an'ny tanjon'ny SEO. Ankoatr'izay, azonao atao ny manondro ny mari-pamantarana graf misokatra mba hanatsarana ny fomba fisehoan'ny rohinao rehefa zaraina amin'ny sehatra media sosialy.
Ny tanàna tsirairay ao Zeevou dia voasokajy ao anatin'ny firenena ary ny faritany na fanjakana iray dia azo faritana ho azy. Eo amin'ny haavon'ny tanàna dia azonao atao ny manampy famaritana fohy ary koa famaritana feno ary mampakatra sary hampiasaina eo amin'ny tranokala farany. Ankoatr'io dia mitovy amin'ny haavon'ny firenena azonao atao ny mamaritra ny safidin'ny SEO.
Ny faritra dia mamela anao hisaraka fananana ao anaty tanàna amin'ny faritra misy ny tanàna misy azy ireo. Ny haavon'ny faritra dia ilaina amin'ny fametrahana taham-bidy betsaka, mamorona sakana ary koa amin'ny fanaovana tatitra sy famakafakana amin'ny ambaratonga maro an'ny tanàna ambanivohitra.
Amin'ny ambaratonga fananana dia azonao atao ny mampakatra boky torolàlana momba ny trano sy torolàlana momba ny fizahana mba halefa mailaka ho an'ny vahiny amin'ny teboka maro mandritra ny fizotran'ny famandrihana.
Ankoatr'izay, azonao atao ny mitazona antsipiriany momba ny fampahalalana mifandraika amin'ny fijanonana, fidirana, fitehirizana, antsipirian'ny WiFi, fanangonana key, ary ny faharetan'ny fikarakarana trano ho an'ny fijanonana maharitra. Azonao atao ihany koa ny manendry ireo mpiasa manana andraikitra isan-karazany amin'ny fananana toy ny mpikarakara trano, mpiasa ao amin'ny birao, mpiasan'ny maso sy antsipiriany izay miandraikitra ny fikojakojana.
Zeevou dia mamela anao hiditra ny URL URL ao amin'ny Google My Business URL ho an'ny trano, hahafahanao mampiasa ireo sehatra ireo amin'ny fiezahana hahazo valiny avy amin'ireo vahiny faly taorian'ny fijanonany.
Ny famaritana, ny sary ary ny fampitaovana ampidirina eo amin'ny sehatry ny fananana dia esorina ho ao amin'ny pejin'ny tranokala ateraky ny rafitra ahafahanao mandray famandrihana mivantana.
Safidy maromaro voafaritra eo amin'ny sehatry ny fikambanana no azo atao mihoatra ny refy ary ampanjifaina hatrany amin'ny fari-pananana, toy ny fandaharam-potoana mialoha ny fanomezan-dàlana momba ny fiarovana sy ny ora fidirana / fizahana ary ny sarany mifandraika amin'izany.
Misy saha voatokana ho an'ny torolàlana momba ny fidirana, torolàlana momba ny fizahana ary antsipiriany momba ny fomba hahitana ilay trano. Ireo rehetra ireo dia azo sintonina ao amin'ireo mailaka mandeha ho azy izay azonao apetraka ao anatin'ny Zeevou, hialana amin'ny filana mamorona modely fanamarinana misaraka ho an'ny trano tsirairay. Ny karazana fisavana sy ny laharam-pahamehany dia voafaritra ihany koa ao amin'ny ambaratonga fananana, ary ny môdely fanamarinana default izay nomena anao raha vao misoratra anarana ianao dia misy fepetra napetraka mba handefasana vaovao mifandraika amin'ny karazana fanamarinana izay mihatra amin'ny famandrihana nomena.
Ho an'ireo miasa eo ambanin'ny marika marobe, Zeevou dia mamela anao hitantana tsy tapaka ny asanao manerana ny marikao amin'ny toerana iray, ary manome toky fa voakarakara tsara ny fanavahana ny varotra. Ny fananana tsirairay dia mitaky marika misy anao ary afaka manana marika fanampiny miaraka amin'izay (izay midika fa hiseho amin'ny tranokalan'ny famandrihana mihoatra ny iray amin'ireo tranonkala namorona ho anao ny rafitra).
Farany, misy sehatra fampahalalana fanampiny izay ho an'ny admin ihany, ary ahafahanao manara-maso ny laharan'ny kaonty sns ... izay azonao atao ny manara-maso mora foana momba anao na ny mpiara-miasa aminao, nefa tsy mila mampiasa Excel spreadsheets.
Ny haavon'ny Unit Type dia napetraka ny fampahalalana izay mahazatra an'ireo singa rehetra voangona ao anatiny. Tafiditra ao anatin'izany ny sanda, ny vidin'ny vahiny fanampiny ho an'ny motera famandrihana, ny sarany mifandraika amin'ny famandrihana toa ny fikarakarana trano sy ny fisavana, ny vola ampaham-bola ary ny fotoana an-trano.
Ankoatr'izay, azonao atao ny manondro ny makiazy amin'ny lafiny efitrano samihafa (trano fidiovana, efitrano fatoriana, lalantsara, lakozia, efitrano fandraisam-bahiny) ary farito ny fandaharana fatoriana isaky ny efitrano.
Raha tianao ny hanao izany dia azonao atao ny manilika ny fampahalalana sasany napetraka eo amin'ny sehatry ny fananana.
Amin'ny ambaratonga iray dia azonao atao ny mampakatra ny sarin'ilay singa, mampiditra na manilika ireo torolàlana momba ny fidirana ary ny antsipirian'ny WiFi napetraka amin'ny ambaratonga avo kokoa, araho ny kaody fidirana an-tariby ary farito ny isan'ny toeram-piantsonana voatondro ho an'io singa io.